आइसोलेसन सेन्टर जान्छु भनि हिडेका काे’राेना सं’क्रमित यु’वक ‘ग’लफ्रेण्ड’सँग समातिए,अब के होला? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
आइसोलेसन सेन्टर जान्छु भनि हिडेका काे’राेना सं’क्रमित यु’वक ‘ग’लफ्रेण्ड’सँग समातिए,अब के होला?
एजेन्सी । आफूलाई को’रोना पो’जेटिभ देखि’एको भन्दै घ’रबाट नि’स्किएका एक ज’ना प्रेमी’कासँगै प’क्राउ परेका छ’न् । को’रोना पो’जेटिभ देखिए’को भन्दै श्रीम’तीलाई ढा’टेर घरबाट निस्किेका उनी प्रेमिका’सहित पक्रा’उ परेका हुन्।
घट’ना भा’रत ईन्दौंर’को हो । भा’रतीय सन्चार मा’ध्यमकाअनुसार को’भिड सेन्टर’मा भर्ना हु’न भनि नि’स्केका श्री’मान सम्पर्क’विहिन भए’पछि श्रीम’तीले प्रह’रीलाई खबर गरे’की थिइन् ।
ईन्दौंर’को ताजो’लमा ब’स्ने २८ वर्षीय ती पूरु’षले फोन गरेर आफू’लाई को’रोना भए’को बता’एका थिए । ला’मो समय श्रीमा\_न सम्पर्क’मा नआए’पछि श्रीम’तीले प्रहरी’लाई ख’बर गरे’की थिइन् । उन’लाई खोज्न प्रहरी’ले पहि’लो चरणमा जिल्ला’का सबै आइ’सोलेसन सेन्टर’मा खो’जी शूरु गरेको थि’यो।
तर ला’मो समय खो’जेपछि उनी अ’न्तै भे’टिए । पुरानो मो’बाइल न’म्बर ब’न्द गरेको भ’ए पनि नयाँ नम्बर लिएको खुलेप’छि प्रहरीले ट्रे’सिङ गरेको थि’यो ।
लोके’सनका आधा’रमा उन’लाई प्रह’रीले पक्र’न सफल भयो । जब उनी प’क्राउ परे त’ब उनको पो’ल खुल्यो । उनी नाम ब’दलेर प्रेमि’कासँग एउटा घर’मा बस्दै आ’एका रहेछन् । NEWS24NEPAL बाट !
Previous भारत भन्छ हामीले उप’हार रेल दियौं,नेपाल भन्छ हामिले रेल किन्यौं,हेर्नुहोस दाबी नै दाबिको चङ्गुल !
Next नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको विकास आफ्नो उच्च महत्वमा छ-चिनियाँ राष्ट्रपति …हेर्नुहोस् ।